“Dalkani Taariikh Buu Leeyahay, Maaha Xamar, Tani Waa Hargeysa, Ninna Ma Sheegan karo Guddoomiye Aan Loo Dooran..” | Ogaalnews
“Dalkani Taariikh Buu Leeyahay, Maaha Xamar, Tani Waa Hargeysa, Ninna Ma Sheegan karo Guddoomiye Aan Loo Dooran..”
August 8, 2017 | Published by: admin
Hargeysa, 08 August, 2017(Ogaal):- Xukuumadda Somaliland, ayaa shaacisay inay Guddoomiyaha la doortay ee Sharciga ah ee Golaha Wakiillada u aqoonsan tahay Baashe Maxamed Faarax, isla markaana Xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Talyanle oo la tartamay oo sheegay in Codkiisii Baashe la siiyey ku eedaysay inay dabada ka riixayaan Musharraxa Madaxweynaha iyo Hoggaamiyaha Xisbiga Mucaaradka ah ee Waddani Cabdiraxmaan-Cirro iyo Xirsi X. Cali Xasan.
Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta iyo Wacyigelinta Somaliland ahna Afhayeenka Xukuumadda Cismaan Cabdillaahi Saxardiid (Caddaani) oo Shalay Warbaahinta qaar kula hadlay Hargeysa, ayaa sheegay inaan Ninna iska sheegan karin Xil Guddoomiyennimo oo aan loo dooran Golayaasha Qaranka Somaliland, isla markaana aanay aqbalayn sheegashada Talyanle ee ay u arkaan mid Xisbiga Waddani ka dambeeyo.
“Xukuumaddu waxay si cad oo aan badh-badh lahayn oo aan muran ku jirin u qaadatay natiijadii Golaha ka soo baxday, sidii ay Ummadda Somaliland oo dhami u qaadatay ee aan hadalku ku jirin. Waxaannu aamminsannahay haddaannu Xukuumadda nahay in si sharci ah oo xalaal ah oo cad hal-dheeri lagu doortay Guddoomiyaha Golaha Wakiillada Jamhuuriyadda Somaliland, kaasina uu yahay Baashe Maxamed Faarax, waxaana hubaal ah oo ummadda fajac ku riday hadalladan dambe ee is-maax-duminta ah ee ka soo baxaya Xisbiga Waddani.” Sidaa ayuu yidhi Wasiirka Warfaafintu.
Caddaani, waxa uu sheegay in Natiijadii Codaynta Xildhibaannada Tartamay ee Baashe iyo Talyanle ku qanceen oo isu-tahniyadeeyeen, balse muranka dambe ujeeddaysan yahay, waxaanu yidhi; “Cabdiraxmaan Talyanle iyo Taageerayaashii fadhiga ka qaybgalay waxay si toos ah u arkayeen natiijadii codaynta ee Golaha Wakiillada ka dhacday. Waxay caddaynaysaa diidmada dambe inay tahay mid ka timi dhanka Xisbiga Waddani iyo Musharraxa Madaxweynaha Waddani Cabdiraxmaan-Cirro, ee aanay ahayn arrin aannu u qabno in Cabdiraxmaan Talyanle diidmadani ay ka timi.”
Wasiir Caddaani oo u baaqaya Shacabka, isla markaana weeraraya Cirro iyo Xirsi, waxa uu yidhi; “Waxaannu Ummadda Somaliland ugu baaqaynaa inaan laba Guddoomiye (Golaha Wakiillada) jirin, Cabdiraxmaan Maxamed Talyanle markii xalay saqdii dhexe ay Xirsi iyo Cirro soo kiciyeen ay soo fadhiisiyeen, Talyanle waa Nin wanaagsan oo dalkan Taariikh ku leh, laakiin wuxuu galay meel qaldan. Cabdiraxmaan Talyanle xalay (habeen-hore) wuxuu sheegtay Guddoomiyaha Golaha Wakiillada inuu yahay oo iyada lafteedu dembi Qaran ah.”
“Dalkani Taariikh buu leeyahay, maaha Soomaaliya iyo Xamar, Somaliland baa la yidhaahdaa, Tani waa Hargeysa, Nin ma sheegan karo Madaxweyne kale, Ninna ma sheegan karo Guddoomiyaha Golaha Wakiillada iyadoon loo dooran, Ninna ma sheegan karo Guddoomiyaha Golaha Guurtida iyadoon loo dooran, Shuruuc baa ka taalla, Nidaam baa ka yaalla, Qofka ama Dadka sidaa u dhaqmayaana waa kuwo ay ku jirto burburin hor leh inay ka sameeyaan Jamhuuriyadda Somaliland, mid Shacabku yeelayaan ama aqbalayaanna maaha.” Sidaa ayuu yidhi Wasiir Caddaani.
Wasiirka Warfaafinta iyo Wacyigelinta Somaliland waxa uu hadalkiisa ku soo gebo-gabeeyey oo yidhi; “Adigoo heli karaya Sharciga inaad marto Qaranka Somaliland uu ku caano-maalay haddaad wax tabanayso, inaad saqda dhexe ku dhawaad 12-kii habeennimo aad tidhaahdo Guddoomiye ayaan ahay la doortay iyadoon lagu dooran, dhaqankaasaan waddankan ka jirin, dhaqankaas ayaannaan oggolayn inay Jiilasha soo socdaa ay aqbalaan, ee Qarankani uu ku caano-maalo in wax la isu hibeeyo, haddii markii ay odhan lahaayeen joojiya waxbaa khaldane sax bay ahaan lahayd. Golaha Wakiillada, Golaha Guurtida iyo Golahayaga Wasiirrada-ba waxaa ka mamnuuc ah mar haddii Codayntu dhacdo hadal wuu dhammaaday.”